Date My Pet » 6 Tips To Sarotra ny vanin-taona mafana Solo!
Last nohavaozina: Mey. 28 2020 | 2 min namaky
"Ny iray dia ny loneliest isa."—Telo Dog Night
... Andray! Mahay fahavaratra olon-tiany.
Dia ny vanim-potoana ho an'ny tia. Dia ny zavatra tiany steamy tantara sy boaty-birao namely sarimihetsika natao ny. Rehefa mifangaro amin'ny herin'ny maizina ny hafanana mahamay, lava alina feno kintana, ary mellow moods afaka manampy ny ho tsara tarehy ny sasany "sizzling" simia ny fiarahana sy ny sehatra fivadiany.
Fa, ny teny dia tsy mitovy ho an'ny rehetra.
Indrisy anefa fa mety ihany koa no ho mafy ny fotoana ho an'ireo nahatsiaro ho toy ny mampiaraka "hain-tany", na ireo izay toa voatifitra amin'ny fitiavana.
Volana vitsivitsy amin'ny vanin-taona mafana dia afaka ho toy ny mitovy amin'ny alika taona.
Fa eto ny vaovao tsara: tsy voatery.
Ny iray dia tsy voatery ho "ny loneliest maro" raha toa ka mamaky sy manaraka ireo toro-hevitra ara-potoana.
6 torohevitra amin'ny vanin-taona mafana na inona na inona ny toerana!
1. Raha tokony manisa ny andro, manisa ny fitahiana.
Marina izany. Na dia mety ho mahatahotra ny ho ampiarahina ny amin'ny cutie, Solo mandeha tombontsoa maro mba hanaiky koa.
Andeha hodinihintsika ny sasany ny. Ahoana ny momba ny hoe manana fahafahana tanteraka ho miantsena 'til anao alatsany? Mahandro raha mamely anao ny toe-po? Ny hanatratra ny nofy tsy fitsabahan'ny?
Mba ho fifantenana "tia tena".
2. mampiaraka ny Tenanao. (Tsy an-katerena lahateny ondana).
Ve ianao fa ho faty ny manandrana hotely vaovao ao amin'ny faritra misy anao izay rehetra Efa "naresaka tao" ny? Tianao ve ny po amin'ny faharatsiana sy ny Vintage divay sôkôla? Ny dia vao horavana kosa sy ampihantaina,? Nahoana no miandry olon-kafa mba hankalaza anao?
Mitsabo ny tenanao; aza mamitaka ny tenanao!
Hoy ny tenin'i Dr. Phil, "Indraindray tokoa ny manome ny zavatra tena mendrika antsika amin'ny olon-kafa."
3. Ampiasao io "nidina fotoana" ho an'ny tena-fanatsarana.
Ny fomba tsara indrindra hisarihana ny vady lehibe dia ny ho iray. Marina. Raha tokony nalahelo ho an'ny tenanao, na miandry ny telefaonina, miezaka niala ny sambokely sy ny fidirana any amin'ilay lalao ny fiainana. Mianatra teny vahiny. Join ny fanaovana fanatanjahan-tena. Sonia ny dihy ho an'ny kilasy. Tsy ireo ihany no fepetra hampitombo ny vidiny eo amin'ny tsena mampiaraka, dia mampitombo ny tena misy vidiny. Carpe diem!
Vato nendahina volo vaovao. Nahandro ny sasany fomba fanamboarana vaovao ao an-dakozia. Redecorate ny pad. Andramo Karaoke amin'ny fisotroana an-toerana.
Single-Dom Fotoan-dehibe ho an'ny tena nahitana sy fitomboana.
5. Manatratra amin'ny famakiana ny sasany.
Tiako ny mamaky. Ary ny tena sarotra amintsika curling hatramin'ny boky tsara, fotsiny noho ny adidy maro—fifandraisana sy ny asa. Satria ianao tsy mety ho "curling ny" miaraka amin'ny mpiara-miasa ankehitriny, dia mora kokoa ny hahatonga ny fotoana lany. Tsy vitan'ny hoe mamaky manitatra ny fahalalana fototra; mety hanatsara ny fifampiresahana fahaiza-. Anaram-boninahitra roa fahazoan-dalana mankany aho dia:
"Tsy izy fotsiny fa ho Ianao" sy ny "Miasà Toy ny Lady, Eritrereto toy ny lehilahy. "
6. Aza ampitahaina na mifaninana.
Namana tsara indrindra manana sipa. Ny vavy mifanambady.
Ny kalandrie ara-tsosialy dia feno fanasana avy ry namana izay toa nankafy fiainana tsara kokoa.
Boo hoo ho anao, marina? Wrong. Hoy ny tenin'i Bruno Mars, "Mahagaga ianao, fotsiny ny fomba dia. "Ataovy ao an-tsaina.
Summer Tsy voatery ho bummer! Misafidy ny hanana toe-tsaina tsara, ny fomba fijery araka ny tokony ho, ary anaty- fiadanana, ary ny sisa dia raiki-toerana.
Alohan'ny fantatrao izany, ianao hianatra hametraka ny "mihira" amin'ny tokan-tena.